Chamisa's MDC, Zanu-PF politicising Cyclone Idai relief aid distribution - Bulawayo24 News
THE Thokozani Khupe led MDC-T has accused Zanu-PF and MDC Alliance of politicising Cyclone Idai relief aid in Chimanimani and other parts of Manicaland which were hit by the whether induced catastrophe last month.
"The two main political parties MDC Alliance and Zanu-PF are heartless," said the outspoken former opposition MP.
Recently, the private media was awash with reports that Zanu-PF officials including Chimanimani East MP, Nokuthula Mwatsikenyere were distributing Cyclone Idai sourced food to Zanu-PF supporters only.
"The MDC Alliance has been mobilising food aid for all the people who were affected by the Cyclone. In fact, to the contrary, it is our supporters who have been discriminated from the aid by Zanu-PF people.
"I do not understand why someone would use state resources to go to Chimanimani and lie to the world. Do you think Zanu-PF would be that stupid to take these people to a place where they know food distribution is being done along partisan lines?" asked Khumalo.
Zanu-PF has also denied taking part in partisan distribution of food and other relief aid.
20 hrs ago | 12524 Views
21 hrs ago | 11393 Views